घर » सुविधा खेल » Troy
खेल जानकारी: Troy
विवरण: ट्रय आक्रमण हो, आफ्नो क्षेत्र रक्षा र शत्रु पराजित, अपग्रेड किन्न र आफ्नो साम्राज्य सिर्जना
खेल्नु: 61,757 ट्याग: रक्षा खेल, युद्ध खेल
सुविधा खेल, रक्षा
बिरुवाहरु बनाम लाश अनलाइन
बनाम लाश बिरुवाहरु: तयार माटो मा सबै-नयाँ कार्य-रणनीति खेल आफ्नो बिरुवाहरु प्राप्त! मजा-मायालु लाश को एक भीड आफ्नो घर आक्रमण बारेमा छ, र आफ्नो मात्र रक्षा 49 प्रेत-zapping बिरुवाहरु को एक शस्त्रागार छ। , पर्खाल-मेवा, चेरी बम peashooters प्रयोग
यो दन्त्यकथा को मतभेद
तिनीहरूले नयाँ प्रतिस्पर्धी अनलाइन खेल खेल्न रूपमा बच्चाहरु उतेजना र तिनका साथीहरूले सामेल! आफ्नो मित्र गर्न परभक्षी को अन्तरविरोध शेयर।
राजा कोंग शहर युद्ध
यो खेलमा, राजा काँग रिस र शहर आक्रमण गरेर सडक मा सबै कुराहरू भङ्ग, यो आक्रमण गर्न प्रयोग माउस।
Simpson स्कूल रक्षा
सिम्पसन सबै शत्रु, आफ्नो मित्र लड्न र आफ्नो स्कूल नष्ट गर्ने आक्रमण मद्दत गर्नुहोस्। गोली आफ्नो मनपर्ने बन्दूक चयन गर्नुहोस्।
zombo बस्टर बढ्दो
लाश द्वारा ल्याए थियो भन्ने भयानक रोग देखि सारा पुस्ता र ग्रह सुरक्षित गर्न तयार छ जो व्यक्ति, हामी हेर्दै छौं। तिनीहरू पनि तिनीहरूलाई एक सबै मान्छे गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं गोली गर्न तयार हुनुहुन्छ? त्यसैले, अगाडि जान!
नौकर सडक युद्ध
शहरमा त्यहाँ नौकर गरेको मिशन शहर को बासिन्दा जोगाउन खराब मान्छे छन् मार्न छ, खराब मान्छे हो। कृपया मद्दत नौकर ड्राइव आफ्नो मोटो कारहरुको मा मान्छे गोली।
ओबामा सेतो घर रक्षा
कृपया ओबामा सबै आतंककारीहरूले नष्ट मदत र व्हाइट हाउस उद्धार
विश्व युद्ध III
दुनिया युद्ध मा छ र तपाईं बच्न हरेक महादेशमा मार्फत आफ्नो बाटो लड्न छ। बस एक पेस्तोल सुरु र आफ्नो रुचि को पहिलो महादेशमा मार्फत हिंड्छन्। बाटोमा तपाईं आफ्नो फाइदा सेना वाहनहरु प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ। surviv राख्न
शत्रु सेना को पिरामिड आक्रमण गर्न चाहन्छु। यो पिरामिड आउँदै सिपाहीहरूले रोक्नुहोस्। मात्र समस्या तपाईं हतियार छैन भनेर, हुनेछ तिनीहरूलाई शत्रुको गरेको हालने चट्टानहरु रोक्न आफ्नो मात्र तरिका हो। छिटो हुन र सिपाहीहरूले वाई दबाउन राम्रो उद्देश्य छ
च्याउ खेत युद्ध
फोहर बाँदर आफ्नो च्याउ खेत सुरक्षित। आफ्नो गाजर गोली र तिनीहरूले भूमि अघि बेलुन विस्फोट। बाँदर आक्रमण नगर्न विशेष हतियार प्रयोग गर्नुहोस्।
मातृभूमि युद्ध खेल
मातृभूमि युद्ध खेल यो वर्ष हजारौं पहिले, त्यहाँ थिए दुई ड्रेगन legion.Under K पनि सबै भन्दा राम्रो नाइट बाहिर एकल ड्रेगन लड्न एक भयानक hell.Humans मा दुनिया बारी मानव world.They प्रयास आक्रमण गर्न दुष्ट रोमी पल्टनमा नेतृत्व भने
मंगल युद्ध td
त्यहाँ एक युद्ध maniacs थियो एक पटक, त्यो संसार युद्ध शुरू उहाँले तपाईंलाई रक्षा को आफ्नो लाइन आफ्नो army.You प्रतिरोध गर्न आफ्नो आधार पकड गर्न सम्भव सबै गर्नुपर्छ संगठित हुनुपर्छ, आफ्नो महत्वाकांक्षा नाश world.To सम्पूर्ण शासन गर्ने प्रयास, शान्ति संसारमा छ को
युद्ध2छडी
तपाईंले पहिले नियन्त्रण गर्ने साम्राज्य को धेरै विद्रोह गरेका छन् - आफ्नो homelands को सरहद गर्न भागिरहेका। उनको संख्या swelled गरेका छन् र Magikill को नेतृत्व अन्तर्गत विद्रोहीहरूको आफ्नो आदेश साम्राज्य एक खतरनाक खतरा भएका छन्! फर्कनुहोस्
क्रोधित चरा ठाउँ HD
ड्रागन बल 1.9 झगडा
दिदीले र हराएको मायालाई
टम बिरालो2कुरा
टम आफ्नो स्पर्श जवाफ र तपाईं एक हास्यास्पद आवाज भन्न सबै दोहोरिदैन भन्ने आफ्नो पाल्तु जनावर बिरालो, छ। तपाईं, उहाँलाई pet उहाँलाई poke वा आफ्नो पुच्छर समातेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यन्तै रमाइलो छ!
केही Doraemon भयो .. र Nobita मेरो आफ्नो कोठा .. यो समय मद्दत Doraemon फिर्ता बन्द थियो! आफ्नो मित्र फेला पार्न र समाधान Doraemon!
oppa गंगनम शैली रन
ठूलो भाइ आफ्नो आधुनिक र उल्लसित शैली संग गंगनम जिल्ला मा पागल रन जा। जंगली प्राप्त र गंगनम मा लोकप्रिय! Oppa गंगनम स्टाइल रन रन !!!
दिदीले कृषि उद्धार
दिदीले पनि खेत बचाउँछ, तपाईंले, सबै जनावरहरूको हेरचाह गर्न अन्डा सङ्कलन र आफ्नो मित्र आफ्ना सबै घरधन्दा समाप्त गर्न मद्दत गर्न आवश्यक छ। तपाईं चिकन Coop, को सुँगुर कलम, वा बच्चाहरु मा मदत गर्न सक्छ
बिल्कुलै टावर रक्षा
सुपर हिरो दस्ते बस turret रक्षा खेल बिल्कुलै टीडी मा खलनायक पराजित तपाईंलाई मदत गर्न आइपुगेको छ।
Hobo 4: कुल युद्ध
कुरा यो hobo लागि पागल रही छ। यो सबै बाहिर युद्ध यो समय छ र उहाँले नयाँ Combos र सबैलाई लिन तयार पुरानो Combos संग फिर्ता छ।